भाइरल साम्राज्ञी ! 'विकिनी' विथ 'बिएफ', थप तस्विर बाहिरियो - Gandak News
भाइरल साम्राज्ञी ! ‘विकिनी’ विथ ‘बिएफ’, थप तस्विर बाहिरियो
गण्डक न्यूज द्वारा ५ श्रावण २०७६, आईतवार १७:०५ मा प्रकाशित
युवा पुस्ताको रोजाई, उदीयमान नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह यतिबेला ईण्डोनेशियाको बालीमा छिन् । उनीसँग ब्वाईफ्रेण्ड देवांक्स राणा सहितका साथीहरु छन् । साम्राज्ञीले सामाजिक सञ्जालमार्फत पोष्ट र स्टोरी शेयर गरिरहेकी छिन् ।
तर, यस्तो फोटो बाहिरियो कि नेपाली समाजले पचाउन नसक्ने भन्दै उनी विवादित बनिरहेकी छिन् । जुन गोप्य अंगमा छोइएका अन्तरंग तस्विरहरु हलिउड सेलिब्रिटीका समेत देख्न मुस्किल पर्छ । तस्विर बिएफ (ब्वाईफ्रेण्ड) सँगको विथ विकिनी फोटोमा देवांक्ससँग टङ किस्, स्तनमा चुम्बन, हिपमा समातिएका दृश्य देखिन्छन् । यही आलोचित बनेको हो ।
प्रेमीसँग मस्ती मुडमा यसअघि प्रियंका कार्की देखिएकी थिईन् तर आयुष्मान जोशी र प्रियन्कालाई नै फ्लप खुवाउने गरी साम्रज्ञी अघि बढिन् ।
चलचित्र ‘कायरा’को छायांकनको समयमा साम्राज्ञीको ट्याटु फोटो सार्वजनिक हुँदा उनको आलोचना चरम चुलिमा पुगेको थियो । अहिले प्रेमीसँगको अन्तरंग तस्वीरले उनको आलोचना त्यस्तै भएको छ ।
सेलिब्रिटी भैसकेपछि कस्ता तस्वीर सार्वजनिक गर्ने र नगर्ने भन्ने छुट्याउन आवश्यक छ । साम्राज्ञीले यो कुरामा ख्याल नगरेको चलचित्रकर्मी नै बताउँछन् । फिल्मकर्मी एवं पत्रकार शुशिल पौडेलले लेखेका छन्:
फिल्म सिटी भन्दा नी समुद्री तट पो आवश्यक देखिन थाल्यो त
Posted by Sushil Paudel on Saturday, 20 July 2019